काठमाडौं । नेपालले मलेसियाविरुद्धको दुई खेलको अन्तरराष्ट्रिय गरेको छ । दोस्रो टी-२० मा मलेसियालाई ६ रनले हराउँदै नेपालले सिरिज जितेको छ । किनररा ओभलमा नेपालले मलेसियालाई जितका लागि दिएको १७४ रनको विश...
काठमाडौं । विनोद भण्डारीले विष्फोटक ब्याटिङ गरेपछि दोस्रो टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजमा नेपालले मलेसियालाई १७४ रनको लक्ष्य दिएको छ । मलेसियाको किनरारा ओभलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाल...
एजेन्सी । कोपा अमेरिका २०१९ को तेस्रो स्थानको खेलमा अर्जेन्टिनाले चिलीलाई २-१ ले पराजित गरेको छ । शनिबार सम्पन्न खेलमा सर्जियो अगुएरो र पाउलो डिबालाको गोलमा अर्जेन्टिनाले जित दर्ता गरेको हो । तर, मेडल...
शीर्ष स्थान कसको ? भारत कि अस्ट्रेलिया ?
एजेन्सी । आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा शनिबार लिग चरणको खेल सकिनेछ । पहिलो खेलमा भारत र श्रीलंकाबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । हेडिङ्लीमा ३ः१५ बजे सुरु खेलमा भारत जितको खोजीमा रहेको छ । त्यस्तै दोस्र...
काठमाडौं । बेलायतमा जारी विश्वकप क्रिकेटको सेमीफाइनलको दुई स्थानमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न तीन देश 'गर्नुस् या मर्नुस'को अवस्थामा पुगेका छन् । गएराती सम्पन्न बंगलादेश र भारतबीच भएको खेलको नतिजा भार...
एजेन्सी । वेस्ट इन्डिजका लेफ्ट ह्याण्नडेड ब्याट्सम्यान क्रिस्टोफर हेनरी गेल(क्रिस गेल)ले एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटबाट सन्यास लिने घोषणा गरेका छन् । किंग्सटोन, जमैकामा २१ सेप्टेम्बर, १९७९ मा जन्मिएका ३...
एजेन्सी । इंग्ल्यान्डमा जारी विश्वकप क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डले हार व्यहोरेको छ । सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावनालाई जिवितै राख्ने क्रममा न्युजिल्यान्डलाई ६ विकेटले पराजित गरेको छ । जारी विश्वकपमा न्युजिल्या...